UBarack Obama uthole ukunikezwa kwezandla nenhliziyo kuMongameli waseZimbabwe
Umongameli waseZimbabwe ohloniphekile wobuzwe, uRobert Mugabe, ngokuphendula isinqumo se-US sokumisa umshado wesilisa ohlukile, wenza isipho samandla nenhliziyo kuBarack Obama ngokwakhe.
UBarack Obama akayena nje umongameli wokuqala wase-Afrika wase-USA, naye waba ngowokuqala owaqeda ukushada ngokomthetho ubulili obufanayo. Yebo, ukuba ngowokuqala kusho ukuba ngowokuqala kukho konke. Ngolunye usuku, u-Obama wanikela isandla sakhe nenhliziyo. Lokhu kwenzeke nguMongameli waseZimbabwe oneminyaka engu-91 ubudala, uRobert Mugabe. Yile ndlela umholi wezwe laseNingizimu Afrika ayenze ngayo ngesinqumo sokwenza isinqumo somongameli waseMelika.
UMugabe wagxeke isinqumo se-"anti-Christian" somongameli waseMelika, okugqugquzela ukuba sodomy. Kodwa-ke, efuna ukusekela umbono ongathandabuzeki, kusukela ekucabangeni kwakhe, ulungele ukushada noBarack Obama uqobo futhi uzokwenza, ngokukhothamela ngamadolo.
"Ngisanda kwenza isinqumo: uma u-Obama evumela imibhangqwana efanayo, uyavikela abesilisa nabangqingili futhi ekhangayo ngokwanele, kufanele, uma kudingeka, ngiye eWashington, ngidumise futhi ngicela isandla sakhe"
Ukugabisa uMugabe akuzange kuthathwe ihlaya, iNhe Zimbabwe Daily yanquma ukuphawula ngesiphakamiso sakhe. Kuvele ukuthi ngokusho komongameli waseNingizimu Afrika, uBarack Obama ngokwakhe ungumlingani, ngoba wanquma ukuvumela abantu ngezinhloso zokuziphatha ngokocansi okungezona zendabuko ukubhalisa ngokusemthethweni ubuhlobo. Ngakho uMugabe wayefuna ukunakekelwa umhlaba ekuqedeni komqondo womshado wesilisa owodwa.
Ukuphikisana okude phakathi kukaMugabe no-Obama
Njengomuntu oyedwa, uMugabe uye wasabela ngokuqinile kunoma yiziphi izinqumo eziqotho emphakathini wama-gay. Eminyakeni emibili eyedlule, wamangalela umengameli wase-United States wezingcindezi eZimbabwe, owenqaba ngokuyinhloko ukusekela ukunyakaza kwegayayiphi nganoma iyiphi indlela. Umholi wezwe uthe ukuqhubeka komndeni kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zezwe, akudingi ama-gay nabesifazane besifazane, kodwa abesilisa nabesifazane abajwayelekile.
"Lo mongameli waseMelika, u-Obama, onguyise wase-Afrika, uthi ngeke asisekele uma singasisekeli ubungqingili. Siyambuza: ingabe ubungqingili babeletha? Kudingeka siqhubeke nomndeni wethu, futhi ngenxa yalokhu sidinga amadoda nabesifazane, hhayi abameleli besifazane abancane "
Umgomo ka-Mugabe wokuzicwaba ngokobulili awuthandani nanoma ubani ezweni lakubo. Ngakho-ke, ngonyaka ka-2010 wabangela ukuthukuthela kwezakhamizi zakhe ezithandanayo, lapho engazange nje wenqabe ukuletha ilungiselelo kuMthethosisekelo mayelana nokuxazululwa komshado wama-gay, kodwa futhi wathi ama-gay "abi kakhulu kunezinja nezingulube".
U-Yana Rudkovskaya usebenzelana nezingane zikaKirkorov ngenkathi eseDisneyland
Umshado weNdodakazi kaPutin yaba isikhangiso esiyinhloko saseMarrakech
UPhilip Jankowski uphawule ngamahemuhemu ngokugula kwakhe
Izithombe zokuqala zomshado oneminyaka engu-84 ubudala u-Ivan Krasko zivele
Ngemuva kwesahlukaniso esivela eTarasov, u-Olga Buzova uzoshiywa ngaphandle kwezindlu nezithuthi
Izimangaliso Zokulondeka: I-Biotherm Aquasourse Everplump
Ukuphuza izitshalo ezimbizeni
UVera Brezhnev waphukisa amahemuhemu ngesahlukaniso kuKonstantin Meladze
Amafutha okudoba okwehla kwesisindo
Amamasa esizayo, impilo, indlela yokuphila
Isaladi ye-pepper elimnandi ne-avocado
I-marinade enhle kunayo yonke ye-shish kebab evela ku-ingulube, inkukhu, inyama yenkomo, i-mutton, i-turkey: izindlela zokuhamba ngezinyathelo ngesithombe
Izici zengqondo zezingane zasenkulisa
I-Fluffy ne-fruitful kiwi izithelo
Amasokotele we-Chocolate ePhasika
Isebenza kanjani ku-Google
Umlingisi uLyubov Polishchuk, biography
Indlela yokunikeza intombazane intombazane?
Indlela yokupheka ujamu kusuka ku-walnuts aluhlaza - izindlela zokupheka ngezinyathelo ngezithombe